फिल्म समीक्षा: हिन्दी फिल्म 'लक्ष्मी' भित्र ओभरएक्टिङ्ग छ ? | News Polar
फिल्म समीक्षा: हिन्दी फिल्म 'लक्ष्मी' भित्र ओभरएक्टिङ्ग छ ?
न्यूजपोलार मंसिर ११, २०७७, बिहिबार
समीक्षक रिजेश पौडेल
“लक्ष्मी” राधब लरेन्स द्वारा निर्देशित प्रथम हरर कमेडी चलचित्र हो । सन २०११ को तमिल फिल्म “कंचना” को रिमेक हो । यसको मुख्य भूमिकामा कलाकारहरू अक्षय कुमार, कियारा आडवाडी, आयशा राजा मिश्रा, राजेश शर्मा, आश्विनी कलेस्कर र शारद केल्कर छन् ।
यो ठूलो बजेटको पहिलो भारतीय चलचित्र हो जसलाई नोभेम्बर २०२० मा डिजनी हटस्टारबाट प्रसारण गरिएको थियो । साथै सयुंक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा भव्य प्रदर्शन गरिएको थियो तर भारतमा कोभिड १९ को महामारीको कारण प्रदर्शन हुन सकेन ।
यो चलचित्र एकै व्यक्तिमा आधारित छ जसको शरिर ट्रान्सजेन्डरको आत्माद्वारा ग्रसित हुन्छ । यदि “कंचना” हेर्नु भएको छ भने, त्यस्तो कमेडी हरर मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्नु हुने छैन किनकी यसको कथा, पटकथा, डाइलग, ओभरएक्टिङ्ग र अनावश्यक कमेडीले दिक्क बनाउने छ ।
चलचित्र कमेडी हरर भनेता पनि त्यस्तो कमेडी र डरलाग्दो रोमाञ्चक निर्देशन छैन । त्यसैले अन्तिम ४० मिनेट कलाकार शारद केल्करको भूमिका रोचक लाग्दछ । तर बाँकी १ घण्टा ४० मिनेटसम्मको मनोरञ्जन बेक्कार छ । चलचित्रको छायाँकन र गीत संगीत ठिकै भएता पनि अनावश्यक संवाद र कलाकारहरूको भूमिका यस फिल्मका कमजोर पक्ष हुन् ।
जे भएता पनि यस चलचित्रको राम्रो पक्ष भनेको ट्रान्सजेन्डरहरू शारीरिक रूपमा भिन्न भएता पनि उनीहरूले जीवनमा कठिनाई र चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्ने अगाडि बढ्छन् साथै सामान्य मानिसहरु जस्तै असामान्य कार्यहरू पनि अवसर प्राप्त भयो भने गर्न सक्छन् भन्ने सन्देशमूलक सामाजिक शिक्षा दिएको छ ।
अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि ७ वर्ष अगाडि यो चलचित्र निर्माण गरिएको भए पूर्ण मनोरञ्जन र सफल चलचित्र हुन सक्ने सम्भावना थियो तर अहिलेको समयमा पूर्ण रूपमा समय र पैसाको बर्बाद गरिएको देखिन्छ ।
# रिजेश पौडेल # चलचित्र समीक्षा
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७, १९:००:१५